Notsapainay tsara ny Xiaomi Redmi Note 3, ny antonony faran'izay betsaka indrindra amin'ny taona | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ny famakafakana sy famerenana video an'ireo terminal Android avy any amin'ny firenena misy ny rindrin'i Shina lehibe, amin'ity tranga ity manokana, nozahanay tsara ny Xiaomi Redmi Note 3 na ilay iray ho an'ny maro no antonony faran'izay betsaka indrindra androany.
Ny Xiaomi Redmi Note 3 dia manana, amin'izao fotoana izao, ny karazany roa nampiavaka tsara ny haben'ny fahatsiarovana anatiny sy ny haben'ny RAM, mba hahitantsika maodely fototra kokoa izay zara raha handany antsika 150 euro izay miaraka amin'ny 2GB an'ny RAM sy 16GB fitehirizana anatiny. Raha ny fanadihadiana ataontsika eto amin'ny Androidsis dia azontsika ny Xiaomi Redmi Note 3 miaraka amin'ny RAM 3 Gb ary tahiry anatiny 32 Gb 200 euro mahery monja.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Redmi Note 3
2 Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Redmi Note 3
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Xiaomi Redmi Note 3
5 Fitsapana fakan-tsary Xiaomi Redmi Note 3
5.1 Horonantsary fandraisam-peo
5.2 Ohatra ny sary nalaina niaraka tamin'ny Redmi Note 3
Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Redmi Note 3
modely Redmi Note 3 / Hongmi Note 3
Operating System Android 5.0 Lollipop miaraka amin'ny sosona Miui V7
efijery 5'5 "IPS miaraka amin'ny vahaolana FullHD 403 dpi ary fiarovana Corning Gorilla Glass
processeur Mediatek Helio X10 64-bit valo-core 2.0 Ghz
GPU Hery VR G6200
ram Modely 2 Gb sy 3 Gb
Tahiry anatiny 16 Gb an'ny 2 Gb an'ny RAM ary 32 Gb an'ny RAM 3 Gb
Fakan-tsary aoriana 13 mpx miaraka amina vava fisaka 2.2 zoro 78 of ary avo roa heny FlashLED
Conectividad DualSIM MicroSIM - 2G: GSM 900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz - Wifi - Bluetooth 4.1 - GPS sy GLGASS aGPS - OTG - Radio FM
Fitaovana hafa Famaranana vy sy sensor ho an'ny dian-tànana amin'ny lamosina miaraka amin'ny valiny 0.3 segondra fotsiny
lafiny 150 x 76 x 8'65 milimetatra
lanja Gramin'ny 164
vidiny € 153'38 16 Gb maodely sy maodely 200 € 32 Gb
Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Redmi Note 3
Redmi Note 3 miaraka amin'ny vatana vy sy lamosina alimo
Ao anatin'izay azontsika dinihina ny tsara indrindra amin'ity Xiaomi Redmi Note 3 ity, mamela ny vidiny tsy hay tohaina, tsy azontsika atao ny manonona zavatra marobe izay mahatonga azy io ho an'ny tsiriko manokana amin'ny vanim-potoana antonony tsara indrindra amin'izao fotoana izao, na ho an'ny vidiny famaranana lafo vidy amin'ny vatan'ny vy sy ny alimo any aoriana miaraka amina bezel volafotsy manome chrome chiffique kanto amin'ny terminal, arakaraky ny famaritana ara-teknika mahafinaritra azy amin'ny haavon'ny avo lenta eo amin'ny tsena ankehitriny.
Ho fanampin'izany, Xiaomi dia manome antsika traikefa mpampiasa tena tsara miaraka amin'ny fampisehoana avo lenta an'ny Android Lollipop eo ambanin'ity soso-kevitry ny fanaingoana MIUI V7 ity izay dinihina sy arahana mba hahazoana tombony betsaka amin'ny Fitaovana mahavariana an'ny Xiaomi Redmi Note 3.
Raha hamintina ireo hevitra momba ny tsara indrindra izay ho hitantsika ato amin'ity Xiaomi Redmi Note 3 ity dia eto dia apetrako ho lisitra izay rehetra afaka manasongadina ny ankamaroan'ny zavatra ho ahy. ny terminal tsara indrindra ao amin'ny Android midadasika amin'izao fotoana izao:
Sehatra fanaingoana MIUI V7 manaitra.
Famaranana mampihetsi-po amin'ny Metal sy aluminium.
Sarimihetsika IPS mampihetsi-po miaraka amin'ny fiarovana Gorilla Glass sy piksela tsara isaky ny santimetatra.
RAM 3 Gb sy fitehirizana anatiny 32 Gb izay manome antsika fitahirizana rindranasa marobe sy hilalaovana ny lalao mangidy indrindra eny an-tsena.
Mpikirakira valo fototra manana kalitao avo sy azo itokisana.
Fakan-tsary mifangaro tsara indrindra azontsika jerena amin'ity sokajy vidin-javatra ity, hany ka ho an'ny terminal maro misy faritra ambony kokoa dia tian'izy ireo ho azy ireo izany.
Feo sy hery avo lenta izay mahatonga azy io ho mahafinaritra ny mankafy atiny multimédia na aiza na aiza na dia tsy mila mampiasa headphone amin'ny tontolo be tabataba aza ianao.
Batterie 4000 mAh manaitra izay na dia tsy mahazo tombony be aza ity kinova Miui ity dia azo antoka fa amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny OTA dia ho voavaha ny olan'ny fanjifana bateria be loatra. Na izany aza, ho tonga amin'ny be dia be isika nefa tsy hiverimberina amin'ny faran'ny andro miaraka amin'ny adiny 4 sy sasany, na efijery 5 ora aza.
Ny ratsy indrindra amin'ny Xiaomi Redmi Note 3
Raha ny momba ny ratsy indrindra azontsika lazaina Xiaomi Remdi Note 3Tsy haiko raha ho ny ratsy indrindra satria tsy ao anatin'ny famaritana ara-teknika azy io, iray amin'ireo zavatra mety tsy ho hitantsika, indrindra ireo izay manapa-kevitra ny hividy ilay maodely miaraka amin'ny fitehirizana anatiny 16 Gb, no tsy manana slot MicroSD ary amin'izany dia afaka manitatra ny fitadidiana anatiny fitahirizana ny terminal, na dia izany aza tsy dia omeko lanja loatra satria 30 euro fotsiny dia manana ilay maodely vitaminaina misy 32 gb fitehirizana anatiny sy 3 Gb RAM.
Etsy ankilany, na dia efa nampiditra azy tao amin'ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Redmi Note 3 aza ny bateria lehibe dia tadiaviko ihany koa ny mampiditra azy ao amin'ny terminal ratsy indrindra hatramin'ny fotoana izay ary mandra-pahatongan'ny Xiaomi manamboatra azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny rafitra, eny Eny, bateria tsara ahafahantsika mitsimbina ny andro fizakan-tena manontolo, ny rafitra miasa dia tsy mifanaraka amin'ny ambony indrindra amin'izany ary Tsy afaka nahazo tombony betsaka tamin'izay tokony ho mpitendry amponga mahay izahay.
Tsy mahazo tombony betsaka amin'ny bateria namboarina ianao
Fitsapana fakan-tsary Xiaomi Redmi Note 3
Ohatra ny sary nalaina niaraka tamin'ny Redmi Note 3
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Notsapainay tsara ny Xiaomi Redmi Note 3, ny antonony faran'izay betsaka indrindra amin'ny taona
Antenaina fa azo ovaina na ahodina ny rom
Luis M. ampos dia hoy izy:
Efa noraisiko tany Arzantina ary ekeny ny NFC, saingy raha ny tena izy dia tsy mila azy io, satria azo ampiarahina amin'ny Bluetooth
Raha mampalahelo fa tsy manana ny tarika ho an'ny 4G 700/800 (any Shina dia tsy mampiasa azy io)
Valiny tamin'i Luis M. ampos
Nicolas Ramirez dia hoy izy:
Salama Luis! Ahoana no nataonao tamin'ny fadin-tseranana sy ny fanafarana?
Valiny tamin'i Nicolás Ramirez
Salama, manana magazay ara-batana any Espana aho ary mivarotra Xiaomis izahay, ity manokana indrindra fa amidinay tsara, tiako ny fandinihanao, fa tiako kokoa aza raha manome vidiny tena izy ianao, ary raha azo atao any Espana dia miresaka izahay momba ny VAT, sns. Ny Sinoa dia tsy manao fanafihana tanteraka, andao hividy vokatra sinoa ... fa miaraka amin'ny VAT, tsy hidirako fa tonga amin'ny teny anglisy sy sinoa izy ireo, na mampatahotra miaraka amin'ny antoka, dia tonga isan'andro ny mpividy internet ka izahay afaka mamelatra sy mandika ny xiaomi. Amin'ireo vidiny voalazanao dia ampio VAT 21% sy ny kaomisiona azon'ny magazay "ara-batana", fikirakirana, mba hahitany, hikasihan-tanana, hahatsapa, hanitra, hanandrana ny xiaomis, ary mandritra izany rehetra izany rehefa mankafy ny fividianana rivotra na fanafanana Tsy lazaina intsony fa ao amin'ny magazay ara-batana dia ny tonga ary mandray tsy misy atahorana ny adidy amin'ny fadin-tseranana sns ... fa raha tonga izy io ary tena izy. Ary noho izany dia manantitrantitra aho, omeo ny vidiny, fa tandremo izay nolazaiko taminao, amin'ny magazay ara-batana, ny vidiny mirary ho an'ireto finday ireto dia € 229 amin'ny ram 2gb ary € 279 ho an'ny 3gb, eo ho eo amin'ny 10 € eo ambany na Ambony , raha tsy ao anatin'ireto mizana ireto izy ireo dia zavatra izay tsy ataon'izy ireo ara-dalàna amin'ny hacienda "fa isika rehetra" dia aza mankany amin'ny fampisehoana ny "fahasalamam-bahoaka" ary mividy any Aliexpres, na mividy amin'ny bazaar sinoa izay mividy ny zava-drehetra ao amin'ny "cobo calleja». Misaotra anao niara-niasa tamin'ny famerenana amin'ny laoniny an'i Espana, tsy te hiditra amin'ny politika na fanalam-baraka aho, taorian'ny Espaniola ny mpanao politika rehetra nomena fahefana, ary izay tsy mahay miteny anglisy, andao aloha hanova ny Espaniola, manana isika ho tia tanindrazana, repoblika na monarchista fa tia tanindrazana.
Guerrero dia hoy izy:
Izay lazainao namana. Fa izaho kosa, raha mbola manohy manangona ny fahantrana azoko amin'ny fiasana amin'ny ora mampijaly ataoko, noho ny governemanta Espaniola malalako, izay manajamba ny masony ary miherika any ankilany, nefa mahazo ny karama mampijaly azony izy ireo, Hanohy hividy amin'ny tranokala toa an'i Aliexpres sy toerana hafa aho. Ary satria azonay tsara izay lazainao amin'ny maha mpivarotra anao, izahay mpividy tsotra fotsiny dia avelao izahay hitsitsy ireo fibre tanindrazana ao anaty orinay. NY EURO NO EURO. Ary hividy isika, izay omen'izy ireo ny vidiny tsara indrindra. Tany Aliexpres dia nividy ilay. Xiaomi redmi Note 3, kinova an'ny 3gigas an'ny ram ary fitehirizana 32, miampy mpiambina efijery sy tranga fiarovana roa. Ny iray amin'ny silipo ary ny iray hafa amin'ny alimo volamena. Tonga tamin'ny € 200 ny zava-drehetra. Aza mandoa na inona na inona ampiana rehefa tonga ny fandefasana. Ary mandraka androany, aorian'ny volana, dia faly kokoa aho. Mahagaga ny terminal ary mahafinaritra izany. Ka heveriko fa ny ankamaroantsika dia mahatakatra tsara ny fampirantianao, saingy izao dia noho ny Internet ary tsy mila mankany amin'ny fivarotana eo an-toerana fotsiny ary afaka mividy na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta nefa tsy miala amin'ny efitranonao, dia io izany. Tsy misy safidy afa-tsy ny mampihena ny vidiny na ny maty. Tsy tadiavina ny tsena maimaim-poana ??. Eny, ananantsika izany. Ankehitriny dia tsy mimenomenona ny mpivarotra satria ny mpampiasa tsotra dia mividy izay mifanentana indrindra amin'ny paosintsika ok. Miarahaba antsika rehetra.
Mamaly an'i Guerrero
Tiako ilay horonantsary, misaotra Francisco, izao no hany tsy hita dia ny BatleZone manohitra ny LG G2 tsy mety maty hehehe, miandry ny fitsapana aho, efa nahazo ity Xiaomi ity aho tamin'ny 5 feb
Salama, tsy nahatohitra ny famaliako ireo hevitra teo aloha momba ny fivarotana Espaniôla.
Lafo kokoa ny fandoavana zavatra rehefa hitantsika fa mora kokoa izany any amin'ny magazay sinoa saingy manohana an'i Jorge aho ary mieritreritra aho fa misy zavatra izay tsy fantatr'i Guerrero / tadiaviny ho hita:
Raha mividy ny zava-drehetra ao amin'ny magazay sinoa isika, mankany amin'ny helo ny varotra ary noho izany ny toekarentsika manontolo.
Mba hanavotana antsika 20 na 30 euro, hikatona ny orinasa espaniola ary raha akaiky ny fivarotana elektronika any Espana dia manjavona ny asa ao amin'ireo magazay ireo fa tsy fivarotana elektronika fotsiny dia misy fiantraikany amin'ny rehetra izany.
Ankoatr'izay, io olona tsy an'asa io dia hisoroka ny fandaniam-bola tsy ilaina toy ny fametrahana varavarankely vaovao ao an-tranony, mividy fiara, mandeha misakafo any amin'ny trano fisakafoanana izay mety hiasan'ny zanakao lahy na ianao, satria tsy tonga any amin'ny trano fisakafoanana ny olona, ​​azo antoka fa ny sefo dia horoahiny ianao, hiaraka amin'ny tsy an'asa na izany aza na hihena bebe kokoa aza ny karamanao izay itarainanao ankehitriny (toa ahy).
Noho izany dia tsy maintsy takatsika fa amin'ny fividianana ny zava-drehetra any Shina dia mampitombo ny toekarena sinoa isika, mividy eto koa, fa mampitombo ny antsika koa.
Mazava ho azy, tsara kokoa ny tsy manana olana amin'ny finday novidiana tao amin'ireo magazay izay tena tadiavintsika, aza hadinoina ny antoka na ny fiverenana, heveriko fa ho an'ny 30 euro bebe kokoa dia mendrika izany.
Guerrero, Tsy resaka fitiavan-tanindrazana no resahina, fantatro fa ny fitiavan-tanindrazana amin'ny firenena mangalatra aminao isan'andro dia manelingelina be izany, saingy tsy maintsy amboarintsika amin'ny demaokrasia misy antsika izany.
Raha tohizantsika izany fihetsika izany dia hitohy hiharatsy hatrany hatrany isika, tsy maintsy mampitaha sy mandanja ny vidiny isika ary tsy avelantsika hanadala antsika izy ireo fa tsy manohana ny fanjohian-kevitrao ianao amin'ity tranga ity, azafady
Etsy andaniny, Movilaco.
NBA 2K17 dia azo alaina amin'ny Android izao
Anchor izao dia manana ny fampiharana podcasting 2 minitra amin'ny Android